Ukwahlula kweCrisis Suez ngo-1956
Icandelo lokuqala: Imbali Yembali yaseYiputa neBrithani
Ngama-1956, iBrithani, iFransi kunye ne-Israyeli yaqalisa iqela lehlabathi elihlaselekileyo: ukuhlasela iYiputa, ukuthatha ilizwe abayifunayo, nokuchonga indlela ezohwebo eza kuvela ngayo kuloo mmandla. KwaSirayeli, oku kwakukunqanda ukukhutshwa kwezemikhosi. Kwababantu baseYurophu, oku bekukugcina ukulawula kwabo ubukumkani malunga neSuez Canal. Ngelishwa eBrithani naseFransi, babecala ngokugqithiseleyo iimeko zomhlaba wonke (ii-US kunye nabanye bechasene) kunye nokukwazi kwabo ukulwa nemfazwe (ngaphandle kwe-US).
Kwabanye abavakalisi, uSuez 1956 yayikufa kwezinto ezithandekayo zobukhosi zaseBrithani. Kwabanye, ihlala isilumkiso esisuka kwimbali malunga nokuphazamiseka kweMpuma Mpuma. Eli nqaku liyinxalenye eninzi liya kunzulu kwiimeko zamabango ngaphezulu kweSuez, kwaye ezininzi iingqungquthela zeengxabano njengamaqabane anqwenelayo aya kutshintshela kwimfazwe.
Ekupheleni komsila woBukumkani baseBrithani
IBritani yayingeke 'yedwa' kwiMfazwe Yehlabathi YesiBini, kungekudala. Wayewisele umthetho omkhulu umbuso, okwakubon 'ukutyekwa, kusele umhlaba. Kodwa njengoko uBukumkani baseBrithani balwa neJamani neJapan, ngoko ihlabathi lashintsha, kwaye ngowe-1946 iindawo ezininzi zazifuna ukuzimela, kwaye ukuba zizimeleyo, zazifuna ukuba izakhiwo zokulawula zaseBrithani zihambe. Kwakunjalo ukuma kweMpuma-mpuma. IBritani yayisebenzise imikhosi yemikhosi yokulwa namanye amaninzi, kwaye ngowe-1950, igcinwe ngamandla amakhulu kunye nempembelelo eyayisetyenziselwa ukunikezela ngeoli ephantsi kunye nokunye.
Intambo yayingenakupheka. Ubukhosi obuncitshiswayo, amazwe akhula ngokuzimeleyo. Ngo-1951 i-Persia yagqiba ekubeni yatsho ekuveliseni ioli kunye nokuvelisa into eyayiyinkampani enkulu ye-oyile yaseBrithani, ukwazisa abasebenzi ababengasadingeki. Urhulumente waseBrithani wezoBudla beli xesha wayesazi ukuba yiyiphi i-nationalization, yayikuthandana nayo ekhaya, kwaye ibhekane neenxeba zokuthumela imikhosi yaseBrithani ukuba iqine inkampani yaseBrithani ithathe ioli yamaPersi evela ePersia.
UNdunankulu, uClement Attlee, watshelwa ukuba i-UK ivumelekile le ntetho, iYiputa ingasilandela ukulawula ilizwe labo kunye nokuhlaziya i-Canal Canal, uxhulumano olubalulekileyo kwiBukhosi baseBrithani. U-Atlee wenqaba, ebonisa ukuba i-US yayichasene nemfazwe, i-UN yayiphikisana, kwaye ingenakuphumelela. Ngowe-1956, omnye uNdunankulu wase-UK, uEden, wayeza kwenza isigqibo esahlukileyo xa ejongene nenkcaso efanayo. Ingxaki ye-Suez yayiye yenzeka ePersia kwiminyaka embalwa ngaphambili.
Olandelayo ukhetho lwase-UK wabona abasebenzi abatshutshiswa ngokungcatsha iBrithani ngenhla kwaye balahleka. I-Conservatives ithatha amandla ngeenqununu ezincinci, zizimisele ukungaphumeleli kwi-Middle East. UNobhala Welizwe Lwamanye amazwe ngoku u-Antony Eden, ongowomnye wabantu abaphambili kweli nqaku nakwiCrisis Suez. WayenguNobhala WezeNgaphandle ngaphambi kokuba abe yiPhalamende emva kokusinda kwiimfazwe zeMfazwe yeMfazwe yokuqala, kwaye kwiMfazwe yeBini ye-Two yayibonakaliswe nguChurchill njengendlalifa. Wayechasene nokukhawuleza kwaye wayeyinkwenkwezi yeTory ephakama, i-PM ekulindeni. Waqukumbela emva kweMfazwe Yehlabathi Yesibili ukuba uHitler wayenokuchaswa ngo-1936 xa ehamba e-Rhineland : ama-dictators kufuneka amiswe kusasa.
E-Suez, wayecinga ukuba usebenzisa ububungqina bembali.
Ukudala kwendlela yokuThengisa iSuez kunye neNkcitho ye-99 yonyaka
Ngo-1858 uFerdinand de Lesseps wayefumene imvume kwi-Viceroy yaseYiputa ukumba umda. Yintoni eyayizodwa malunga nale nto, kwaye yintoni eyathatha ubuninzi bezobuchule kunye neqhinga likaFerdinand, yayingumlambo ovela kwiLwandle Olubomvu ukuya kwiMeditera ngokusebenzisa i-Isthmus yaseSuez encinci, iikhilomitha ezilikhulu ukusuka ehlane nasemachibi. Kuya ku-Asia ukuya eYurophu nakumaMbindi-Mpuma kunye nokunciphisa ixesha kunye neendleko zorhwebo kunye noshishino.
I-Universal Universal Inkampani yeCanal Maritime Canal yadalwa ukwenza oku. Kwakuyimpahla yesiFrentshi kwaye yakhiwa ngaphantsi kwemisebenzi yabo yaseYiputa. IFransi neBritani abazange babone iso elisezantsi kweli xesha kwaye iBritani iphikisana nomsele wokulimaza iFransi, iququzelele ukutshatyalaliswa.
IYiputa kwafuneka kuthenge izabelo ezongezelelweyo ukuqhubela izinto phambili kwaye zihlawule imali eninzi ukuxhasa iphrojekthi (into eya ku-Nasser yayiza kubonisa emva koko). Kwiminyaka engamashumi asithoba anesithoba yanikezelwa njengenkxaso yekampani. Nangona kunjalo, i-Viceroy yayingabhukumi ngemali, kwaye ngo-1875 yayidangele kakhulu imali yaseYiputa yathengisa i-44% yomlambo ukuya eBrithani ngoku. Kuya kuba sisigqibo esiyingozi.
Ubukhosi baseBrithani neYiputa
IBritani yayicinga ukuba yayiyiphendule imephu yehlabathi ibe yinqaba, kwaye yayinesiqingatha somsele. Babengazange. Le nkampani ayizange ibe neyakhe inqanawa, yayinelungelo lokuyiqhuba kude kube ngowe-1963, xa abanini bomngcwabo womzimba, iYiputa, bebuyile. Ukwahlukana kwalahleka kwingqondo yaseBrithani. Ngokukhawuleza iYiputa yayisemva koko, emva koxinzelelo-ngokuqhelekileyo kwezemali, njengoko ubukhosi baseBrithani neFrentshi bayibuyisa ubuzwe kwaye inkqubo yokuvukela iphelile ngempi yaseBrithani ekuthinjweni kweYiputa, ethembisa ukuba ihambe xa ukuzinza kukhuselekile. IFransi yayiphuthelwa ithuba lokujoyina ngokungabhikisani, kodwa igcinwe into ababekholelwa yinto yamalungelo enqanawa. Ngokomyinge waseYiputa, umjelo wawuvumele iBritish ukuba ihambe, kwaye iBritani ayizange ihambe ixesha elide.
Iziphumo ezibangelwa yimikhosi yamazwe zavelisa izivumelwano kunye nezivumelwano malunga nokusetyenziswa komsele. Baye baqulunqwa kakhulu ukuze bazuze ama-imperials. KwiMfazwe Yehlabathi Elinye , iBrithani yawahlambalaza yaye yenza iYiputa ibakhuselekile xa ubukhosi base-Ottoman bujoyina iJamani. Umsele wawubonwa njengeliBritish.
Kwakungazange kube ngaphaya kwabo beyithatha. Emva kweMfazwe yeMfazwe yokuqala, iYiputa yaba ngumbuso olawulayo ngolu hlobo lokuba kusekhona inceba yaseBrithani, isimemezelo sayo sokuzimela sihlale sinelungelo lokuba nomkhosi apho ukukhusela umbuso wayo. Kwakukho ukumkani waseYiputa; kwakukho i-prime minister (ngokuqhelekileyo yindoda efanayo-yo-yo-in-out and out). Ngowe-1936, omnye u-Antony Eden, uNobhala Welizwe lase-UK, wavuma ukuhoxiswa kwamandla onke e-UK evela eYiputa ... ngaphandle komkhosi omncinci wokubamba umnqweno, kunye nelungelo lase-UK ukusebenzisa ilizwe njenge-pad pad. IMfazwe Yehlabathi II ilandelwa ngokulandelelana , kwaye ibutho laseBrithani lahambela phambili. AmaYiputa ayengafuni kakuhle oku, xa befuna ukuba luhlanga olungathathi hlangothi, ngakumbi xa iBritish yatshintsha urhulumente ngesibhamu. AmaBrithani bacinga ukuba abahlali bangekekanga. Emva kwemfazwe, abaseBrithani bashiya elo lizwe ilizwe, kodwa bashiya ukumkani ohlazolekileyo, urhulumente ohlazisiweyo, kwaye wagcina indawo yabo yokulawulwa kwinqanaba.
Impembelelo kaSirayeli kuMbindi Mpuma
I-Britani kunye nembali yabo eYiputa yaba nefuthe elibi kunyaka ka-1956. Kodwa ukugqithisa okukhulu kunokuphela kokupheliswa koMbindi-mpuma kumazwe ngamazwe, ukukhawuleza, ugqirha kunye nolunye u-buck-kudlulisela i-entsha echazwe ukuba yenziwe, i-Israel, ingenaso ingcamango efanelekileyo kwimiphumo emfutshane okanye ende ende. Umbuso omtsha omele uvele nje phakathi kwendawo ezama ukufumana ubusuku bombuso kufuneka ibangele ingxaki, okanye ukuba imfazwe ibangelwe.
Ngoku kukho ingxaki yokufudukela kwamanye amazwe: ama-Arabhu axoshwa kwilizwe elitsha, abafuduki beza kulo. EYiputa, esondla enye inkosi yaseBrithani, kunye nokwesaba ukufika kwamanye amazwe kwaSirayeli, yanceda ekukholeni impendulo yaseArabhu eyayikhokelela kwiMfazwe yokuqala ye-Arabhu yase-Arabhu. Okanye, ukumkani waseYiputa wenza, kuba wayefuna ukubuyisela igama lakhe.
Ngelishwa kuba ukumkani, umkhosi waseYiputa wawungenakuxhotyiswa kwaye wawubhubha. U-Israyeli wathatha umhlaba ngokugqithiseleyo kunokuba i-UN ikhuthaze; Udumo lokumkani lwangcwatywa. IBrithani, evuyisa ukusebenzisa iYiputa njengesiqhelo seminyaka emininzi, engamncedi apha kunye neengalo ezithintekayo ukuze angabambisani ne-US. IYiputa ephukileyo yashiywa yingxaki yeGaza, indawo encinane yashiya ikampu enkulu yempumulo apho uSirayeli wavuma ukuba ayifuni. Emva kwemfazwe, iBrithani yaqalisa kwakhona ukuthengiswa kweengalo zeArabhu zazama ukubuyela eYiputa, njengoko ihlabathi liye lakhutshelwa yimpikiswano yeCold War phakathi kwentshona nakumaMpuma (kodwa, inyaniso, kungekhona phakathi kwedemokhrasi nakwintandokazi), kunye wayefuna iintlanga zaseMbindi Mpuma njengama-proxies. I-US, i-UK kunye neFransi, abathwali abaqhelekileyo basentshonalanga kwiMfazwe yamaCold , bavunyelwene neSibhengezo seThathu, apho babeya kuqikelela ukuba balinganise ukuthengiswa kweengalo kunye nokungenelela ekuhlaselweni kwe-Middle East.
Ngokuphathelele uSuez, imfazwe phakathi kweSirayeli neYiputa yayingagqibekanga. Kwakukho isivumelwano se-armistice, esasikuvuyela u-Israyeli ukuxhoma, ngoko ababaleki kunye neminye imibuzo engaphendulwanga ngaye. Ngoko, iYiputa ingaqhubeka isenza njengombuso olawula inxaxheba kwimfazwe emisiwe? Yayifuna, yayinelungelo, kwaye yayivimbela amaSirayeli apho yayingenako, kwaye loo nto yayithetha ioli kwiSuez Canal. IBrithani, ukulahlekelwa yimali, iholele umyalelo we-UN ukuxelela iYiputa ukuba ivumele ioli, ibenze iphumelele ioli kumntu olwasemlilweni. IBrithani yayinemikhosi ejikeleze umnqweno ukuze ibe yinyanzeliso, kwaye uNdunankulu, uChurchill, wayefuna, kodwa uEden wayechasene. Ekugqibeleni, yanyaniswa kwaye, okwesikhashana, iYiputa inelungelo lokuzikhusela.
I-Britani neYiputa kwiminyaka yama-1950
Emuva eBrithani, i-Eden yayincede uluhlu lwezigqibo ezinkulu zamazwe ngamazwe kwaye yathi iBritani kufuneka yenze umgaqo wayo kunokuba yenze oko i-US eyayikuxelele yona. Yena, njengoNobhala weNgaphandle waseBrithani, wabonakala ekhohlakele kuMongameli we-US, i-Dulles. Kwindoda enegama elichasene nokukhawuleza, i-Eden yayifumana ukugxekwa okukhulu ekhaya ukukhawuleza.
EYiputa, umkhosi waseBrithani kwinqanawa yayingathandeki kakhulu. AmaYiputa axhobileyo aqalise imfazwe yokulwa nomkhosi, kodwa i-doal workforce yazama ukuxabela ukufumana abantu abavela ngaphandle bathatha imisebenzi yabo. Ukuxhatshazwa kwaba yintlondi kunye nokufa kumacala omabini. Kodwa utshintsho lwaluza, kwaye ngoJulayi 22-23 1952 ukumkani ohlazisiweyo wathatyathwa ngumkhosi waseYiputa owafuna ukuziphakamisa nokuzimela. UColonel Sadat wamemezela iinguqulelo kunye noGeneral Naguib wayengumholi wegosa, kodwa amandla ayenamadoda amancinci emva kweemifanekiso. Umkhosi waseBrithani wahlala kwindawo kwaye wajonga. IYiputa kunye neBrithani babenemiba yokusebenza, kwaye umsele wawungomnye wabo. I-Eden yayisemlilweni ngokunikela kakhulu kwiindawo zokuhlala eSudan, kunye neentshaba zase-Eden zathi iBrithani yayingagcina kuphela amandla ehlabathi ngokugcina umsele. Wonke amehlo aye e-Eden ukwenza idibaniselwano.
Nangona kunjalo, noChurchill wavumelana ne-Eden yokuba ama-80,000 amabutho e-canal yayiyinkcitho ebiza. Becinga ukuba mhlawumbi iYiputa yayingathengwa kwinkqubo yemikhosi yokukholisa iBritish. Kodwa iBritani ayinalo igunya lokwenza oku kwaye icebo kwakufuneka lisebenzise inkxaso yase-US; Oku kwakuthetha uMongameli uEisenhower osanda kutyunjwa, iqhawe leMfazwe yesiBini II, kunye noNobhala kaRhulumente uJohn Foster Dulles. Babengafuni, kwaye iYiputa yayifuna iBrithani. UChurchill wayekulungele ukulwa.
EYiputa, inkokeli yamagosa amancinci emva kombhikisho, kunye nethemba leYiputa elikhululekile, yayinguGamal Abdel Nasser . I-Eden ngoku yagula, uChurchill wenza njengobhala wenkundla yangaphandle kunye nezinto ezivuthayo, kwaye i-Dulles yazi ukuba i-future ubudlelwane base-US kunye neMbindi-mpuma mhlawumbi akufanele iqhube imibuso yaseBrithani neyesiFrentshi. Umnqweno wase-US wawungekho kwisigqibo kwi-canal, kwakungenxa yokuguqula uMbindi Mpuma ube yinto yokulwa namaSoviet. Iingxoxo zange zikwazi ukuvumelana nemininzi yemikhosi ehambayo, kunye neelwimi elinesine ukuhlala kunye neBritish ilungelo lokubuyela ukuba iYiputa ihlaselwe ngumntu ngaphandle koSirayeli. U-Israyeli wayekhululekile ukuhlaselwa. Umnqophiso wenzelwe ukuhlala iminyaka eyisixhenxe, kodwa iintetho zagqitywa.
Ngama-1954 jikelele uNaguib walahlekelwa yimfazwe yakhe ukuba ibe yinto engeyena ngaphandle komfanekiso, kwaye uNasser waba nguNdunankulu enegunya langempela. Wayethukuthele, enesihe, kwaye wayexhaswe yiCIA. I-US yamncedise ukuba athathe amandla njengomviwa ogqwesileyo kwiNkokheli yaseGibhithe enobungane. Babengazange baqwalasele indlela iBrithani enobungane ngayo. Nangona kunjalo, idibaniselwano yagqitywa: impi yaseBrithani yayiza kubakho ngo-1956, kwaye isiseko sasiza kuba ngabasebenzi bakontrakthi. Umnqophiso wawuphela ngo-1961, kunye neBrithani - nzima ukuhlangabezana neemfuno zemali zokuba yinkokheli yehlabathi-ilungiselelwe ukuyeka umjelo endaweni yokuvuselela le ntengiso. EYiputa uNasser wayemangalelwa ngokunikezela kakhulu (kwakukho izibhengezo zaseBrithani ukuba zibuyele eYiputa ukuba ezinye iindawo zahlaselwa), kodwa wayeziguqula ngokwakhe, ahlasele ubuzalwana bamaSulumane aze alahle iYiputa njengenkokeli yemvelo eMiddle East .
Ukuphakama nokuwa kweBorgia Family
Imbali yesivumelwano seHlf-Way
I-Contain: Isicwangciso seMelika soKhomishini
Iincwadi ezilungileyo kwiSpeyin History
Iziganeko ezibalulekileyo kwimbali yeSpeyin
Indlela Yokubonga NgesiLatin
Ngo-2015 I-British Open: Zach Johnson Denies Spieth, Iwunqobe
IJografi kunye neMbali yeIndiya
I-10 (okanye ye-11) Uluhlu lokuFunda lweBakala
Ii-Bigfoot Iividiyo ze-Sasquatch, i-Yeti ne-Skunk Ape
2016 I-Volkswagen Passat Review
Indlela yokuLahla iiKholeji kwiKholeji
IVeki Inkcazo kwiSayensi
Izikhumbuzo nezikhumbuzo ezixelela ibali
Iingcaciso eziBhulu zesiBhulu zesiFrentshi -NgesiNgesi